Madaxweyne Xasan oo kormeerey xero ciidan & isbitaal Imaaraatka Carabtu dhiseyso (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeeray xarrumo ay dowladda Imaaraatka Carabtu ka dhiseyso magaalada Muqdisho, kuwaasoo kala ah xero lagu tababaro ciidamada iyo isbitaal.
Danjiraha dowladda Imaaradka Carabta u fadhiya Soomaaliya, Mohamed Al-Othman iyo xubno kale oo ka socday dowladdaas ayaa madaxweynaha ku wehlinayey kormeerkiisa.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marka hore tegay xarruntii hore ee agoonta xooga dalka ee degmada Hodon, kuna dhow kulliyadda Jaale Siyaad, halkaasoo dowladda Imaraatka Carabtu ka waddo dib u dhis, iyadoo halkaas laga dhigayo xero lagu tababaro ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya, Jen. Daahir Aadan Cilmi ayaa madaxweyne Xasan warbixin ka siiyey qaabka uu ku socdo dhismaha xeradan, isagoo xusay in loo diyaarinayo xero tababar oo leh meelo la jiifto oo u kala qeybsan rag iyo durmar, meelo lagu tababarto, meel debris lagu sameeyo iyo meelo lagu cunteeyo.
Jen. Daahir Aadan Cilmi ayaa sheegay in la filayo in wajiga hore ee dhismaha xarruntaan lagu soo gebagebeeyo bisha June ee soo socota.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal u jeediyey shaqaalihii dhisayey xeradan ayaa u mahadceliyey dowladda Imaaratka Carabta oo dusha u ridatay dhismaha xeradan.
Wuxuu madaxweynuhu shaqaalaha halkaas dhisayay ku dhiiri geliyey iney shaqada si wanaagsan u qabtaan, islamarkaana ay ka fogaadaan ka mid noqoshada Alshabaab.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhismaha xeradan aya shaqo ka heleen ilaa 900 ruux, wuxuuna tilmaamay in dowladda Imaaratka Carabta oo walaal ah Soomaaliya ay dalka usoo gurmatay.
“Walaalaheen Imaaraatka Carabtu wey inoo soo gurmadeen, marka shaqada waa in la wanaajiyo, mashaariic badan oo shaqo laga helayo ayaa dalka imaan doona” ayauu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayey shaqlaaha ka shaqeynayey dhismaha xerada dowladda Imaaraatku u dhiseyso ciidamada Soomaaliya.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa kormeeray Isbitaal oo weyna oo dowladda Imaaraadka Carabtu ka dhiseyso degmada Cabdil-caziiz ee gobolka Banaadir.
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa dhawaanahan dardargelisay taageerada ay u fidneyso dowladda Federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo horay dalkeed ugu soo tababartay ciidamo gaar ah oo qeyb ka qaata ilaalinta madaxtoyada.
Sidoo kale, dowladda Imaaraatka Carabta ayaa bishaan April 2014 gaadiid iyo qalab siisay ciidamada amaanka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, dowladda Imaaraatka Carabta ayaa taaageero u fidisay dad Soomaaliyeed oo dhibaateysan, kuwaasoo isugu jiray dad qabay dhaawacyo oo dalkeeda loo qaaday si loo wadweeyo iyo carruur agoon ah oo ay deeq gaarsiisay.
Miino qadiimi ah oo afar ruux ku dishay deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud